Ergamtuu wayyaane kun gaazeexeessitoota Oromoo hojiirraa arihaa jira jedhu – Welcome to bilisummaa
Ergamtuu wayyaane kun gaazeexeessitoota Oromoo hojiirraa arihaa jira jedhu
Maqaan isa Zelalem Jemanee jedhaama.
Kan dhalaate Godiina Wellaagga lixaatti
Hojiin isa jalqaaba poliisi ture booda gara OPDO tti makaamuudhan dabbaalle OPDO ta’e barnoota fageenya Alpha irra dippiloma horiidhan akka bitaate bekaamadha.
Bulchaa Godiina wellaaga lixas tureera
bara 1998 filaanno bara 1997 booda ummaata Mandii ykn mana sibuu Tankii bishaanitti summii naqee nama fixuu fi turee dha.
Yeroo amma finciila diddaa garbuumma Oromiyaa kessaatti adeema jiruu baraattoota fi ummaata irraatti tarkaanfi du’a fi rebiicha kan fudhaachisa jiruus isadha.
Guyyaa kalessa gazexissitoota STVO 17 Hojii irra akka ari’aman kan tasiise nama kanaadha.
Namnii kun Wellagga lixaatti ha dhalaatu iyyuu malee matiin isa Nefxaanyadha .
Abba ijoolle lamati Finfinnee nannnoo Meksii ko jedhaamu jiraata.
Oroomon hunduumtu nama kana mada inni Oroomo fi Oromiyaa irra gessise fi jecha bara baraan gantuu nu kessaatti guddaate nama keenya fixa jirtuu kana akka bartaaniifan isiini barreesse.!
Guma ijoolle keenya nii deffaanna nama kanaas seeraatti guyyaa nuti dhiessinuus fagoo miti
Kanaaf Oroomo jabaadha wal jajjaabessa .!!!
Previous 17 Oromo journalists of Oromia Radio and Television Organization (ORTO) have been fired since June 25, 2014.
Next Gaazexeessitoota 17 Dhaabbata Raadiyoofi Televiziyona Oromiyaa irraa ari’aman”